အောင်လ ရဲ့ LT | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အောင်လ ရဲ့ LT
အောင်လ ရဲ့ LT
Posted by black chaw on Jun 18, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity, News | 49 comments
ခေတ်ကိုမီအောင်လိုက်ဖို့ လိုပါတယ် ကျောင်းဒကာ…။
ခေတ်ကို မမီရင်တောင် ခေတ်ရဲ့ပြေးလမ်းမှာ ဟိုးနောက်ဆုံးကို မရောက်ရှိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ…။
ခေတ်နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ခေတ်ရှေ့က ပြေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့…။
ဟိုတလောလေးက ရွာထဲမှာ LT ကိစ္စအတော်လေး ခေတ်စားခဲ့တာ ခင်ဗျားမှတ်မိဦးမှာပေါ့…။
အဲဒီလို နားရှက်စရာကိစ္စတွေဆို ဘလက်ကြီးက ပြောရဆိုရမှာ ရှက်တတ်တာကြောင့် ၀င်မဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့…။
ဘလက်ကြီးတို့က ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ နေခဲ့ရတာလေ…ဟေးဟေး…။
LT ဆိုလို့ ကိုထူးဆန်းတို့ ကိုစံလှကြီးတို့ မ၀င့်ပြုံးမြင့်တို့ကိုတောင် လှမ်းသတိရလိုက်မိသေး…။
ဟိုတလောက ရွာထဲ အဲဒီ အကြောင်း ဆွေးနွေးငြင်းခုန် ခဲ့ကြသေးတယ်လေ…။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က မိန်းမမရသေးပဲ ကလေးလိုချင်တယ် ဆိုတဲ့ အောင်လ အကြောင်းလေး
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်မှာ ထည့်ပြောခဲ့သေးတာ မှတ်မိဦးမှာပေါ့…။
မသိလို့ ရေးခဲ့မိတာ တောင်းပန်ပါတယ် အောင်လရယ်…။
သူ့သီချင်းနဲ့ သူ့ ပြန်တောင်းပန်ရတော့မယ့် အပေါက်…။
ပုဂ္ဂိုလ်က မိန်းမမရပဲ ကလေးလိုချင်မှာပေါ့…။ သူတို့က LT လုပ်နေကြပြီကိုး…။
ဘလက်ကြီးကတော့ အဲဒီလို ပွင့်လင်းတာကိုကြိုက်ပါတယ်…။
ဟုတ်တယ်လေဗျာ…။ တချို့ LT တွေက ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်တွေနဲ့…။
အတူတူ နေနေတာ နှစ်လလောက် ရှိနေပြီ…တဲ့…။
ဘရက်ပစ်တို့ ဂျိုးလီကြီးတို့လိုပေါ့ ဟေးဟေး…။
ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်း ကိုယ့်မိဘတွေ မင်္ဂလာဆောင်ကို မမြင်ဖူးဘူးလေ…။
ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ မိဘတွေ မင်္ဂလာဆောင်ကို မြင်ဖူးစေချင်လို့ စဉ်းစားမိတာပါ တဲ့…။
သူမြင်ဖူးအောင်ပဲ သူ့ဖေနဲ့ မေက LT ရဦးမယ့် အပေါက်မျိုး…။
LT ဆိုတာလောက်နဲ့ ရှင်က မကျေနပ်နိုင်ပဲ
ကလေးရမှ မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတာတော့ ရှင်လွန်ပြီ ကိုအောင်လ…ဘာညာသာရကာ နားပူမှာပေါ့ဗျာ…။
ဟေးဟေး…အဲဒါကတော့ ဘလက်ကြီးစိတ်ကူးထဲက ထိုးဇာတ်ပါ…အောင်လနဲ့တွေ့ရင် သွားမေးမနေကြနဲ့ဦး…။
အဲဒါနဲ့ ဒီဝါကျွတ်လောက်ကို အောင်လတို့ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ကြမယ် ဆိုလား…။
လောလောဆယ်ကတော့ သူတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက် လင်မယားလို နေနေကြပါပြီတဲ့…။
အောင်လလေးလို ရဲရဲတင်းတင်း LT နိုင်ကြပါစေဗျာ…။
ဒီပို့စ်က ကျွန်တော့်ဆရာ သကြား ဆီမှာ စာမေးပွဲဖြေထားတာပါ။
သူသင်ပေးတဲ့ စာလုံးဖေါင့်လေးတွေ အရောင်ထည့်တာ ကြီးတာသေးတာ
စသည်ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်သင်ကြားပြသပေးသော
ဆရာဦး မာဃ အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း…။
တပည့်ကြီး လက်တွေ့အသုံးချထားတာလေး အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာ
ကျနော်က ပြောရုံပဲပြောတာပါဗျာ ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် လုပ်ပေးတာလဲ မဟုတ်ပါဘု
တလေးတစား အထင်တကြီး အတုယူတတ်ကြပါတယ် ။
ကောင်းလေ လေ့ ကောင်းလေ လေ့
အောင်လ ရဲ့ အဘွားဆုံးသွားလို့ဆိုလား
အဲဒါနဲ့ ဘက်ဂီယာကလည်း ထိုးလို့ မရတော့ ဘူးဆိုတော့…
မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ၀ါကျွတ် ကို အတူတူနေရင်း စောင့်ကြလေသတည်းပေါ့ဗျာ…
အခြေအနေအရ LT တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ ကိုဆာမိရယ်…။
ကဘချောတို့ သွေးကောင်းလို့ပွဲတောင်းတာ ကြီးတစ်ကြီး အထင်အရှားကန့်ကွက်ထားတဲ့ ကိတ်စကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ရဲဒယ်ပေါ့လေ…
အောင်လ နေတာ…။ အောင်လ သွားပြောပေါ့…နော့်…။
အောင်လ လို ပွင့်လင်းလိုက်စမ်းဘာ…။
ဒီထဲ ၀င်ဖတ်နေတဲ့ ကိုကို တို့ မမတို့ရော
LT ကြီးကို လွတ်အောင် ရှောင်နိုင်ခဲ့ကြရဲ့လားဆိုတာ
နာ မှားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
ပြော နာ့ ကို မချစ်ဘူး ဆိုလည်း ပြော။
သများ အာ့ဆို ၂ လလောက် နောက်ကျသွားတာပေါ့နော်။
ဒါမဲ့ မနက် ရုံး တူတူသွားတယ်။
အလုပ်လုပ်နေချိန် ဘေးမှာ တူတူရှိတယ်။
ည မအိပ်ခင် မောင့်မျက်နှာလေး ကြည့်ပြီးမှ အိပ်တယ်။
မနက်နိုးတာနဲ့ မောင် ဆီပဲလာတယ်။
ဪ။ မန်းလေး ဂဇက် ဆိုတဲ့ မောင်(အမ်ဂျီ) ကို ပြောတာပါ။
ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ သူ့ဘာသာသူ ဆောင်ချင်ဆောင် မဆောင်ချင်မ။ သူ့ကောင်မလေးကတော့ အပျိပြန်မဖြစ်မှာ အသေအချာပဲ။
အင်း လုံမလေး ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်…။
သားလည်း ယုစ့်နဲ့ အယ်လ်တီချင်တယ် ကိုကို
အယ်တီ ဖို့ သားက အရွယ်မရောက်သေးပါဝူးကွယ်…။
အင်းပေါ့ဆြာဘလက်ရယ်… သူတို့က ဆယ်လီဗျစ်တီဆိုတော့…
နာမည်ကြီးအောင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် စတန့်ထွင်ပြီး ဖွ မှာပေါ့…
အဟိ… သူရို့ နှမသားချင်းကို “အတူနေမယ် ခလေးရမှလက်ထပ်မယ်” ဆိုရင်ကော ???
မတော် အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် သားသမီးမရခဲ့ရင် ဘယ်သူနစ်နာမှာလဲ…
ကျောက်စ်ငယ်ငယ်… ပုသိမ်က အိမ်နီးချင်း ပေါက်ဖော်ကြီး ဦးအိလိက်သားက ပေါက်ဖော်မကြီး ဒေါ်ကျေးရဲ့သမီးကို မိဘတွေသဘောမတူလို့ ခိုးပြေးတယ်ခင်ဗျ ။ လက်ရှည်မျိုးနဲ့ လက်တိုမျိုး ၊ မျိုးမတူလို့ ဒေါ်ကျေးက ပေးစားဖို့ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းတာပေါ့ဗျာ ။ ပြေပြေလည်လည်နဲ့ အားလုံး အဆင်ပြေစေချင်လို့ ပေးစားဖို့ လာညှိတဲ့ ဦးအိလိက်လည်း ဒေါပွပြီး ဂန္ဓာလရာဇ်သံ မြန်တျန့်စကားနဲ့ ရပ်ရွာလူကြီးများကို အမှူးထားပြီး ပွါးလိုက်တာက…
“မိစေ… လု စင်းစား ၊ ဘီတူ့ တောက် _ိ ကွဲမလဲ ၊ လု တမီးပဲ တောက် _ိ ကွဲမှာပဲ” တဲ့လေ…
ပရိတ်သတ်လည်း တခွီးခွီးနဲ့ ပတ်တုပ်လို့မရ ၊ ဒေါ်ကျေးလည်း ဒေါသူပုန်ထပေါ့…
တကယ်တော့ ပေါက်ဖော်ကြီး ဦးအိလိက်ပြောချင်တာက…
“မိကျေး… နင်စဉ်းစား ၊ ဘယ်သူ့ တောက်ရှက်ကွဲမလဲ ၊ နင့်သမီးပဲ တောက်ရှက်ကွဲမှာပဲ” လို့ ဆိုချင်တာပါ…
အခုလည်း… “ဘီတူ့ တောက် _ိ ကွဲမလဲ…” ပြန်မေးရမှာပဲ…
အဟိ… ဘာတွေ မန့်မိတယ် မသိဘူး… ရိုင်းသွားရင် ခွေးလွှတ်ပါ…
အဲ့လိုနေလို့ တော်၏ ဆိုရင်
မင်္ဂလာဆောင်ပြီး လပိုင်း ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ
ဟိုမင်းသားလို. . .
အော်. . . .ဖြစ်ပုံ တွေ . . .
@ alinnsett ;
LT ဆိုတာ နေချင်တိုင်းနေလို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ညီလေးရဲ့…။
ဆော်ကြည်ဘဲတွေ မှ နေလို့ရတာဗျ…။
စော်ကြည်ဘဲ မပါကြေး….အဟိဟိ ….
အော်…LT …LT …တော်တော်ခေတ်စားနေပါ့လား…နာလည်းနေကျိချင်လိုက်ထှာ
LT နေချင်တာလား ကိုမိုက်…။
ဆော်လေး လန်းတယ်ဗျ…။ နေမား…။
ပွင့်ပွင့်လေးလေးပေါ့… ကောင်းပါတယ်.. ဟိုလေ.. ပါးစပ်ကတော့ သမီးက ငယ်သေးတယ်.. ဒါတွေမစဉ်းစားသေးဘု.. ကျနော် အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို အလုပ်အကျွေးပြုချင်သေးတယ်.. ဒါတွေမစဉ်းစားသေးဘူးဆိုပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေထက်စာရင် အဲလိုပွင့်လင်းတာကို သဘောကျတယ်.. အောင်လကိုယ်တိုင်ဆိုတာဆိုလို့…. မှားတာရှိရင်တပုဒ်လောက်ပဲသိတယ်… သူ သူများအတွက်ရေးပေးတဲ့သချင်းတွေကတော့ သီချင်းကြားတာနဲ့ သူ့သီချင်းမှန်း သိလောက်အောင် ပုံစံလေး တစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်.. :))
ဟုတ်တယ်…။ ဦးဘလက် ဒီပို့စ်တင်တာလည်း
အောင်လကို ရှုတ်ချချင်လို့ တင်တာမဟုတ်။
အောင်လ ရဲ့ ပွင့်လင်းမှုကို သဘောကျလို့ တင်တာ…။
ခရစ်ပြောတာကို ထောက်ခံတယ်။ အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးထက်စာရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာကို ပိုသဘောကျတယ်။
အသက်ပြည့်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်လို့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်လို့ ကိုယ့်ဘ၀ကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးတာ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါတွေကို ကဲ့ရဲ့စရာ အားကျစရာရယ်လို့လည်း မမြင်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်ပဲ ။
ကိုယ့်မျက်ချေးကို မမြင်ပဲ သူများအပေါ်မှာပဲ လိုတာထက်ပို အာရုံထားနေတတ်သူတွေမှာပဲ( အထူးသဖြင့် )ပတ်ဝန်းကျင် မှာပဲ ပြသာနာရှိတာ ပါ။
ဆယ်လီဗျစ်တီဆိုတော့လည်း အပင်မြင့်တော့ လေတိုက်ခံရမပေါ့။
စကားမစပ် စိုင်းစိုင်းပေ့ခ်ျတခု ပြန်ဖွင့်ပြီ ။
ကွန်းမန့် ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မပုခ်ျရေ…။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေခဲတောင်များထဲက ရေခဲတောင်
ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ရွာမှာ တင်ပေးဖို့
တကယ်လို့ ခင်ဗျား မတင်ဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော့် ဟာ ကျွန်တော် ကူးတင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
ကိုသစ် တုန်းကလို တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ…။
အပန်းမကြီးရင် တင်ပေးပါဗျာ…။ နော…။
ခဏလေးတော့စောင့် ပါ ကိုဘလက်ရယ် မအားသေးလို့ပါ။ လကုန်ခါနီးလောက်ဆို သများတို့ ဖိုးမက်လောက်သုံးလို့ရမယ်ပြောတယ်။ လိုင်းလည်းကောင်း လူလည်းအားတဲ့အခါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပေးပါ့မယ်။ ပုံတွေများများ တင်ချင်လို့ပါ။
သူကြီးသတင်းစာက စာမျက်နှာ ကန့်သတ်ထားလို့ ဆောင်းပါးသီးသန့်လိုပဲ သဘောလောက် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ညှစ်ရေးလိုက်တာပါ။
နောက်လ ပထမအပတ်လောက်လည်း နောက်ထပ် တောင်တက်ခရီးတခု ရာထားသေးတယ်။ ခွင့်ရရင် သွားဖြစ်မယ်။
အောင် လ ကပွင့်လင်းတာလား
လုလု နားမလည် တော့လို့ ပါ
အဲ့လို နေ နေ ပါတယ် ဆိုတာကို လူ အထင် ကြီးအောင်ထုတ်ပြောနေတာလား တကယ် လို့ သူ့ 
ကောင် မ လေးနဲ့ အ ကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ မယူဖြစ်
လိုက်ဘူးဆိုရင် ရော ကောင် မ လေးဘက်ကိုထည့်
မတွက် တော့ဘူး အခု မြန်မာပြည်က ဒီမိုက ရေ စီ ရ
သွားပြီလား ရခဲ့ ရင် ရော အဲဒါ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ 
ဆီလျော် ရဲ့ လား တွေးကြည့်မိတော့ နောက်လာမယ့်
မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက် ရင် လေးမိပါတယ်
ဒို့ နိုင် ငံ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ
လူငယ်တွေအတွက် လည်း အရမ်းကြီးရင်လေးမနေပါနဲ့ဗျာ…။
LTဆိုတာနဲ့ ခိုးစားတယ်​ပဲထင်​​နေကြတယ်​။ ကိုယ်​​နေချင်​တဲ့သူနဲ့​နေလို့ရမယ်​ထင်​​နေကြတယ်​။ ရိုင်းရိုင်း​ပြောရရင်​ စက်​စ်​ ကိတ်​စ ကိုပဲ​ပြေး​ပြေးမြင်​​နေကြတာ​တော်​​တော်​စိုးတယ်​။ အဆင်​​ပြေရင်​ သူ့ထက်​သာတာ​တွေ့ရင်​​နောက်​တစ်​​ယောက်​​ပြောင်းမယ်​။ အဲ့ဒါနဲ့ LT က​တော်​​တော်​ဆိုးဝါးတဲ့ ပုံစံဖြစ်​​ရော။ ​ဒီမှာ​တွေ့ဖူးတဲ့ LT ​နေကြတဲ့သူ​တွေ ​တော်​​တော်​များက ​တော့ အဲ့လိုမဟုတ်​ဘူး။ သူ့တို့က အ​ပေါင်းအသင်း​တွေနဲ့မိတ်​ဆက်​​ပေးရင်​။ ငါ့မိန်းမ.ငါ့​ယောက်​ကျားဆိုပြီး​ပြော​လေ့ရှိတယ်​။ ပြီးရင်​ လက်​ထပ်​ကြတာများတယ်​။ ဘယ်​သူမှလည်း ဒီ​ကောင်​မ​လေး ဒီ​ကောင်​​လေးနဲ့ LT ​နေတယ်​. အရှက်​မရှိဘူး လို့လည်း​ပြောတာမကြားမိပါဘူး။ ဒီရက်​ပိုင်း​လေးပဲ အလုပ်​ရုံးခွဲက တစ်​​ယောက်​လက်​ထပ်​သွားတယ်​။ သူ့တို့က​လေးက ၁၀နှစ်​၀န်းကျင်​ရှိ​နေပြီ။
ခိုးစားတယ်ရှိုဒါ ဘာယဲ ဟင်င်င်
LT နဲ့ နည်းနည်း စိမ်းနေသေးလို့ ပါ ဗျာ…။
တဖြည်းဖြည်း အသားကျသွားရင် နားလည်နိုင်စွမ်း မြင့်လာကြမှာပါ…။
ငင့်…. LT က ခိုးစားတာမှ မဟုတ်တာဗျ သူတို့ဟာသူတို့ နှစ်ဦးသဘောတူ ဖြစ်ကြတာပဲကို။
LT မှာ ဒီကိစ္စ တစ်ခုတင်မဟုတ်တာလဲ မသိမဟုတ် သိပါရဲ့
အဲ.. ဒါမင့် ကောင်းတာကလွဲ အကုန်လုံးကို လိုက်လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတဲ့ (ကိစ္စ အတော်များများကို ကောင်းကွက်တွေပဲ ပယ်ပြီး ယူနေတဲ့) ဒီနိုင်ငံမှာ
ခေတ်၊ စနစ်ရဲ့ အလိုအရ လိုအပ်ရင် ထွက်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ အချိန်မတန်သေး လို့ပဲ မြင်တယ်ဗျ။
ခေတ်မီအောင်လို့ နားစွန်နားဖျား နားထောင်သွားတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း နားထောင်သွားတာ ကျေးဇူးပါ မမရေ…။
ဖတ်အပြီး တစ်ခြားတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြောချင်တော့ဘူး။
ငယ်တုန်းက အနားက မျောက် တွေ ပြောတတ်တဲ့ စကားလုံးကို သွား သတိရတယ်။
အဲဒီ ခေတ် က မက်စီ ဆိုတဲ့ စကပ်( ရှည်ရှည် ပွပွ နော်) ဝတ်ရင်တောင် အင်မတန် ခေတ်ရှေ့ပြေး တဲ့ ဟာမလေး လို့ အဝေဖန်ခံတတ်ရတဲ့ အချိန်။
မက်ဒေါနား ဝတ်သလို လက်ကောက်၊ ဆွဲကြိုး မျက်စိရှုပ်အောင် ဆွဲ ပြီး ခါးပြတ် ရင်ဟိုက် စပေါ်လာချိန်။
ကိုယ်ပိုင်ကား နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဘတ်စ်ကား လို မျိုး စီး ရသူတွေ ဆို ဝတ်လဲ ဝတ်ချင်၊ အရမ်း ဝတ်လဲမဝတ်ရဲ ။
ဒီတော့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပုံစံ ဖြစ်။
အဲဒီ ပုံမျိုး ဆို သကောင့်သား မျောက် တွေက “တော ဟော့” ကြီးတွေတဲ့။
အခုလဲ LT ဆိုတာ ကို သူများ အနောက်တိုင်း မှာလို ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ဘဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပုံစံ ဖြစ်ရင်တော့ “တော ဟော့” ကြီးတွေလို့ ခေါ်သင့်မလားလို့။ အဟိ။
“ကလေးရမှ မင်္ဂလာဆောင်ချင်တာ” ဆိုတာ ကို တော့ သဘောကျပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ တွေ ကို ကလေး ကကြည့်ပြီး သူ မပါတာ ကို ပြောမဆုံး တာ အမှန်ဘဲ။
ဘာလို့ သူ မပါတာလဲ မေးရင် ဖြေရတာ ရှင်းရတာ ရှည်လွန်းလို့။ :-)))
တော ဟော့ ကြီးတွေ ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ အစ်မရေ…။
ကတောက် … ခုချိန် ဆံဖြူ သွားကျိူးအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာ နာ သကွာ …
@ ကထူးဆန်း ;
ဖွဲတစ်ဆုပ် တော့ နိုင်သေးတယ် မဟုတ်လား ဗျာ…။
ခုခေတ်လူငယ်တွေတော့အတုလိုက်ခိုးကြအုံးတော့မှာပဲ။ မိန်းကလေးတွေကကိုယယ်နစ်နာမနစ်နာ သိပ်လဲမတွေးကြတော့ဘူး။ အော်ဒုတ်ခ ဒုတ်ခ
ွှီအို…အဲ့လိုကြီးလည်း မတွေးပါနဲ့ မသည်းနုအေးရယ်…။
ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေက မခိုးသင့်တဲ အတုတွေကို မခိုးရကောင်းမှန်း
.အဲ့ဒါမျိုး ကျုပ်တို့တုန်းက ဘာလို့ ခေတ်မစားပါလိမ့်နော်……
.လူဖြစ်စောတာကိုပဲ နောင်တ ရ ရ မလို…..
.အဲဒါ LT ကြတာကို ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး…
.သို့သော် LT ကြရင်းနဲ့ မယူဖြစ်ကြရင်လဲ ဘာမှမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် နော …..
LT လို အိုသည်မရှိတဲ့ ဗျ…။
ပိုက်ဆံ သာ အဓိကပါဗျာ…။
LT တပ်ချုပ်ကြီး လာပြီနော်။
တကယ်က မယားပြိုင် ဥပဒေကြီးကသာလျှင် တကယ့်ခေါင်ချုပ်ကြီး။ ဒါကြီးက အားလုံးကို ဖျက်ဆီးသွားတာ။ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေခိုင်မာပြီဆိုရင် LT ကို လက်သင့်မခံချင်လို့ မရ၊ လက်သင့်ခံရတော့မယ်။ LT နေတာ သူများကို မထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ဘာပြစ်မှုမှ မရှိဘူး။ မယားပြိုင်ဥပဒေကြီးကတော့ ဒီဥပဒေအောက်မှာ မြန်မာမတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ ချောင်းစီးခဲ့ရပြီ။ ခုထက်ထိလည်း ချောင်းစီးနေရဆဲ။ စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါဦး အရပ်ကတို့။ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သက်ရလာတဲ့အခါမှာ တခြားမိန်းကလေးက သူ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျို မှုကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ပြီး အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ တရားမျှတမှု။
ပြောလိုက်ရင် သမီးတို့က မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါးအိမ်ရာ ကို မပြစ်မှားပါဘူး။ သူတို့ပိုတတ်တယ်။ အဲဒီ သူတစ်ပါးအိမ်ရာကို မပြစ်မှားသင့်ဘူးဆိုတဲ့အသိထက် အခု ပိုလွှမ်းမိုးနေတာက ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အားလုံးအတူတူစားခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့အသိ။ မယုံဘူးလား။ မယုံရင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းကြည့်လိုက်။ မျှစ်မ ပြောတာ မှားရင် ပါးလာရိုက်စမ်းပါ။ ဆိုက်ကားသမားကိုတော့ ဘယ်စားမလဲ။ စာလို့ရတဲ့ယောက်ျားကို စားမှာပေါ့။
ပြောလိုက်ရင် အမျိုးသမီးတွေ ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေချည်းပဲ။ တကယ့်ဥပဒေကြီးကိုက ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကို ရိုက်ချိုး ထားတာ။ အဲဒီတော့ ပညာတတ် မိန်းမက နောက်ကောက်ကျပြီး ဟို… တင်တင်နု တို့၊ ရင်ရင်ဖြိုးတို့ ခေတ်ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဒီကိစ္စတွေဟာ လောလောဆယ် တိုင်းပြည်အတွက် အရေးမကြီးပါဘူးလို့ မယူဆကြပါနဲ့ဦး။ မိသားစုတစ်စုချင်းစီရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုတွေ စုစည်းပြီး တိုင်းပြည်ကြီးဆိုတာ ဖြစ်လာရတာ။ အဲဒီမှာ မိသားစုတစ်စုချင်းစီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှားပြီဆိုတော့ ဥပမာပေးရရင် လူ့ခန္ဒာကိုယ်က အသေးဆုံးဆဲလ်လေးတွေ မှားယွင်းဖွဲ့စည်းလာပြီဆိုရင် တစ်နေ့မှာ အဲဒီလူ ရော၈ါရမှာပဲ။ အခြေခံအကျဆုံး လူမှုရေးအမြင်ဖြစ်တဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေ မှားတာများလာတဲ့အခါ တိုင်းပြည်ကို ထိတော့မှာပဲ။ အခြေခံအကျဆုံးအမြင် သဘောထားဖြစ်တဲ့ အဲဒီ LT ကိစ္စကို လူကြီးတွေပိုင်းက လက်သင့်ခံပေးဖို့ရယ်၊ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ပေါ်ထွန်းဖို့ရယ်၊ အဲဒါလေးတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးကြပါရှင့်။
တိုင်းပြည်နဲ့ချီတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ ရောဂါတစ်ရပ်ကတော့ အခုဆို ကုသလတွေ လူအင်အားတအားများလာတာကို လက်သင့်မခံနိုင်တော့တာပါ။ စကတည်းက တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေခိုင်မာခဲ့ရင် ဒီလိုဖြစ်မလား။ မိန်းမတစ်ယောက် မွေးနိုင်ရင် ကလေး ၁၀ယောက်ပေါ့။ အခုလို ကုသလတစ်အိမ်ထောင် ကလေး ၂၅ – ၃၀ ဖြစ်မလား။
သာမီးလေးတွေရဲ့ ဝိုင်းအစားဖို့ အသင့်ရှိဂျောင်းဗာ အမ်တီပိုး..
ဒီတစ်ခါတော့ ငြင်းဖို့ လာတာမဟုတ်ကြောင်းလေး အရင်အသိပေးပါတယ်။
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် မပြုံး မှတ်ချက်လေးဖတ်ပြီး ကိုယ့်မိန်းကလေးတွေ အတွက် စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။
မယားပြိုင်ဥပဒေကြီးကတော့ ဒီဥပဒေအောက်မှာ မြန်မာမတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ ချောင်းစီးခဲ့ရပြီ။ ခုထက်ထိလည်း ချောင်းစီးနေရဆဲ။
ဒီအကြောင်း မပြောခင် အရင် LT ကို စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
LT ဆိုတာ မင်္ဂလာမဆောင်ဘဲ တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ခြင်း လို့ ဆိုရင်မမှားပါ။
LT နဲ့ “မင်္ဂလာဆောင်ပြီး တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ခြင်း” နဲ့ ဘာကွာလဲ။
ကွာတာက မင်္ဂလာမဆောင် ရင် ဥပဒေအရ စာချုပ် စာတန်းတွေ လုပ်စရာမလိုဘူး။ လူတွေရှေ့ ကျောက်ရုပ် အသေကြီး တွေလို မျက်နှာပြောင်တိုက် အညောင်းခံ ဟန်ပန်ထုတ်ပြီး ရှိုးပြထိုင်နေစရာမလိုဘူး။
ဒါဘဲ ကွာပါတယ်။ မဟုတ်လား။
ဟိုးအရင် ကထဲ က အရှေ့၊ အနောက် ၇အိမ် သိရင်ဘဲ ပုဆိုးတန်းတင် အကြင်လင်မယား ဖြစ်ပြီ ဆိုစကားရှိသေးတာဘဲ။
ဒါကြောင့် လူလွတ် ၂ဦး သူတို့ဟာ သူတို့ သဘောမျှလို့ ကတော့ ဘာမှ ကန့်ကွက်ရန်မလိုပါ။
ဝမ်းနည်းစရာက LT နေတဲ့အခါ ဥပဒေအရ စာချုပ် စာတန်းတွေ မရှိတာမို့ ဒီမိန်းကလေးမှာ ဒီယောကျာင်္းလေး ကိုရော သူ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေကပါ တရားမဝင်တာပါဘဲ။
ဒီတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ကြည့်ရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အတွက် လူနှစ်ယောက် (ကျား/မ မခွဲဘူးနော်) “တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်” ဖို့ က အဓိက ဆိုရင်တော့ ဥပဒေအရ စာချုပ် စာတန်းတွေ လုပ်စရာမလိုတဲ့၊ မင်္ဂလာဆောင်စရိတ်မကုန်တဲ့ LT နည်းကို ရွေးပေါ့။ :-)))
ကွဲကြ ကွာကြလဲ ပစ္စည်းခွဲဝေမှု တွေ အရှုပ်အရှင်းမလိုတာမို့ အင်မတန် ခေါင်းရှုပ်သက်သာသပေါ့။
မပြုံး ရဲ့ အစ်မကျွန်မ လား။
အဲဒီ အခါတော်ပေးကြီး ကို အလွန်မုန်းလွန်းလို့ ဘာ ပွဲမှ တရားဝင်မလုပ်ခဲ့။
မိဘ နဲနဲ စိတ်ကျေနပ်အောင် အိမ်နီးချင်းတွေ ကို အိမ်ခေါ်ကျွေး အသိပေး။
အရင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ကို ဘူဖေးကျွေး။ ပြီးပါတယ်။
ကြားက လက်ဖွဲ့ လို အစားတွေ စီစဉ်ပေးသူရှိလို့ မင်္ဂလာဆောင်စရိတ် လုံးဝ မကုန်သလောက်ပါ။
အဝတ်အစားလဲ ရှိတာ ထုတ်ဝတ်ပေါ့။
လက်ထပ်စာချုပ် ကို လုပ်စရာမလိုလို့ကတော့ လုံးဝ မလုပ်ပါဘူး။
ယောကျာင်္းယူတာ သူ့ပစ္စည်းကြောင့် ယူတာမဟုတ်လို့ ဒီ အတွက် ဆိုရင်တော့ ဘာ စာမှ မချုပ်ပါ။
ခက်တာက နိုင်ငံအပြင်ထွက်မှာကြောင့် လင်မယားဖြစ်မှ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာလွယ်တာမို့ လင်မယားဖြစ်ကြောင်း သက်သေအတွက် ဒီ မုန်းတာကြီး ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို လက်ထပ်စာချုပ်ချုပ် လက်မှတ်ထိုးတာ ကို မင်္ဂလာဆောင်တယ် လို့ ခေါ်ရင်ဖြင့် အတူ မနေခင် သုံး လေး လ ကထဲ က မပြုံး အစ်မ စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပါတယ်။
အောင်လ နဲ့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်ထိုးချိန် အဖေ အမေ သူငယ်ချင်း အသိ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မခေါ်ပါ။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ဒါဟာ ကိုယ့် ဘဝ အတွက် ဘာမှ အရေးမပါ တဲ့ ဆိုင်းထိုး တာလုပ်တဲ့ ကိစ္စ မို့ပါ။
တရားရုံး ကို နှစ်ယောက်သွား၊ အဲဒီ ရုံးက မသိတဲ့ လူကြီး ၂ယောက် ကို အကူအညီတောင်း ပြီး အသိသက်သေ လုပ်ခိုင်း ပြီး ရတဲ့ စာရွက် စာတန်း ကို သိုးဆောင်းဘာသာပြန် ပြီး ဗီဇာ လျှောက်ရတာပါ။
ဘာမှ လဲ မထူး၊ ရင်လဲ ခုန်စရာမလို၊ အဲဒီ အချိန် မှာလဲ ဘာဘာညာညာ မတွေး။
လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပါဘဲ။
တစ်ဖက်ကလဲ နင် နဲ့ ငါ လက်မှတ်ထိုးပြီး လင်မယား ဖြစ်ပြီ မို့ လင်မယား လို နေကြရအောင် တစ်ခွန်းမှ မဟ ခဲ့ပါ။
မိဘ တွေ အရိပ်က မထွက်သေးသမျှ အချိန် မရောက်သေးသမို့ သူငယ်ချင်း စိတ် ဖြူဖြူ လေး ပါဘဲ။
၁၀နှစ်ကြာအောင် ပေါင်းခဲ့တဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း နဲ့ မိဘ အိမ်က ဆင်း လိုက် တဲ့ အချိန်ကျမှသာ လင်မယား အစစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီ အချိန်အခါတော်ပေးမရှိလို့ LT ဆိုလဲ LT ပေါ့။
အခုချိန် အဲဒီ စာချုပ် ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါ။
ကိုယ့် ကိုလဲ ဥပဒေ နဲ့ ထိန်းချုပ်တာမကြိုက်တာမို့ ယောကျာံး ကို လဲ ချုပ်မထားချင်ပါ။
အချင်းချင်း နားလည်မှု၊သည်းခံ ခွင့်လွှတ်မှု၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ ဖြူစင်တဲ့ တဏှာကင်းတဲ့ချစ်ခြင်း တွေ နဲ့ ဘဲ ထိန်းချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသမီး တွေ ရဲ့ ပုံစံ တွေ ပြောင်းသွားတတ်တာလဲ ပြသနာတရပ် လို့ ဆိုချင်တယ်။
သားသမီး လေးတွေ နဲ့ အိမ်ထောင်တာဝန်ကို ထိန်းရတဲ့ မိန်းမ တွေ မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းလာတတ်တာ အပြစ်မပြောသာပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုလဲ မဖြစ်သင့်ဘူး။
တစ်ချို့ အစွန်းရောက်တတ်သူတွေ ကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကျော့ နေအောင် လှလှပပနေ၊ အိမ် မှာပွရှုပ် ကလေးတွေက ကြောင်ချေးရုပ်နဲ့။
အိမ်ထောင်ကျပြီးလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင့်တယ်လှပ အောင်နေသင့်တယ်။
ကိုကြီးမိုင်း ပြောခဲ့တဲ့ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် ကိုလိုက်လို့ပေါ့။
ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ကိုယ်တော် ဟာ တကယ်တော့ အရင်ကထဲ က ဇ ရှိပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေ ဆွယ်တာ ကို ကျလောက်အောင် စိတ်ဓာတ် မခိုင်ကြည် တဲ့ သူ ကို ရွေးထားမိ တဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို မှာလဲ အပြစ်မရှိပေဘူးလား။
အိမ်ထောင်ကျအပြီး နင်လဲ နင် လုပ်ချင်တာလုပ်၊ ငါလဲ ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မရှိရင် နဂိုထဲ က အပြန်ပြန်အထပ်ထပ် စဉ်းစားဖို့ မကောင်းပေဘူးလား။
ဓလေ့ ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု ကို လိုက်နာသင့်ပါရက် နဲ့ “ငါ့ အလိုကိုလိုက်ပါ” လို့ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ကထဲ က တောင်းလာတတ်တဲ့ သူဟာ နောက်ပိုင်းမှာရော ဘယ်လောက် စိတ်ချသင့်တယ် လို့ မမှန်းသင့်ပေဘူးလား။
နောက်တစ်ချက်က သဝန်တို စိတ်။
ကိုယ့် ဖြစ်သလို နေနေတဲ့ အမြုံစိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလှတော့ ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ အားငယ်စိတ် နဲ့ မြင်ရာ မိန်းကလေး နဲ့ သဝန်တို တာလဲ မကောင်းတတ်ဘူး။
ဒီမှာလဲ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ကိုယ်က စည်းမစောင့်၊ တဏှာရာဂ ကြီးတဲ့ သူ ကို ရွေးထားပြီး ဒီလူတော့ ဒီလိုဖြစ်နေမှာဘဲ လို့ ကိုယ့်စိတ်က ထင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်မယ်။ တကယ်လဲ ဖြစ်နိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် နဂိုထဲ က တည်ကြည် တဲ့ သူ ကို မရှာသင့်ပေဘူးလား။
မဆီမဆိုင် (ဆရာ) စိုင်းခမ်းလိတ် ကို သွားမြင်မိတယ်။
သူ့ Facebook Page မှာ (အန်တီ) နွဲ့တင် ကို ချစ် မြတ်နိုး တဲ့ စကားလေးတွေ ကြားနေရဆဲဘဲ။
အင်မတန် ရင့်ကျက်တဲ့ လူတစ်ယောက် ရဲ့ ခိုင်မာ တဲ့ သံယောဇဉ် မေတ္တာ ဟာ အိုမင်းတဲ့ အထိ နုပျို နေဆဲ ပါဘဲ။ အဲဒီ စကားလေးတွေ ဖတ်ရင်း အန်တီ့ ကို အရမ်း အားကျတယ်။
တကယ် ကံကောင်းတဲ့ မိန်းမ လို့ ခေါ်ရမလား။ တကယ် တော်တဲ့ မိန်းမ လို့ ခေါ်ရမလားဘဲ။
ကိုယ့် မိန်းကလေး တွေ ကို ပြောလိုပါတယ်။
ဥပဒေ က ပေးတဲ့ အကာအကွယ် ကို စောင့်နေရတာ မဟန်ပါဘူး။
ဥပဒေ က ပေးတဲ့ အကာအကွယ် နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္ထာ ကို ထိန်းထားလို့ မရပါဘူး။
ကိုယ့် အသိဥာဏ်ပညာ နဲ့ ယှဉ်တဲ့ ရွေးချယ်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ တည်ကြည် တဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ စိတ် အလိုကို မလိုက်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း တို့ကဘဲ ကိုယ့်ကို အကာအကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝ ရဲ့ တကဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဟာ တကယ်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။
တစ်ခြား အရာတွေ က သာမာန် အပံ့အပိုးတွေပါ။
နေရာတိုင်းမှာ အပေး အယူ ပါဘဲ။
ကိုယ်က မတည်ကြည် ဘဲ တည်ကြည် တဲ့ သူ ကို ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အပျိုကြီး အဖြစ်နေရတာ ပိုပြီး ဂုဏ်ရှိပါတယ်။ :-)))
ဒီလို အသိလေးတွေ ကို မိန်းကလေးတွေ ကို နားဝင်အောင် လုပ်ပေးချင်တယ်။
ကဲ ချစ်ညီမ ရေ။
ပြန်ဆွေးနွေး ပေးရင်ဖြင့် ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခု ထပ်ရမလားပါဘဲ။
(ကဘချော – ဒီမှာ မှတ်ချက်အရှည် ကြီးရှင့်၊ ကျုပ် မောင် ဝမ်းမြောက်ပါလေတော့)
အစ်မလတ် နဲ့ မပြုံးရေ…။
စိတ်ပါလက်ပါရေးတဲ့ ကွန်းမန့်တွေက ပို့စ်တင်သူတွေကို
ဒီရွာထဲမှာတော့ ကွန်းမန့် အပေးကောင်းသူများ စာရင်းမှာ
အစ်မလတ်ရော မပြုံးရောက ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိတယ်လို့
ကွန်းမန့်လေးတွေ ချီးမြှင့်ပေးကြတာ အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…။
အရီးလတ် ပြောတာကို ကျမ မထောက်ခံပါ။ သူပြောတာ မှားသလားဆိုတော့ ဘာမှ မမှား။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့အတွက်ပဲ မှန်နေတယ်။ အခြေခံလူများစုအတွက် မမှန်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ သဘောတရားတွေ အလုပ် မဖြစ်ဘူး။ တင်းကျပ်တဲ့ ဥပဒေကသာလျှင် အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အခု အရီးတွေးပုံမျိုးဟာ သိပ်ကို မှန်နေပေမယ့်လည်း လူတိုင်းဒါမျိုး မတွေးဘူး။ တကယ်ပြောရရင် သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက် တန်ကြေးဟာ ၅သိန်းပဲ ရှိပါတယ်။ နယ်ဘက်တွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ယူလို့ အဆင်မပြေ၊ ကွာရှင်းရင် နစ်နာကြေး ၅သိန်းပဲ ရတယ်။
အင်း … ခက်နေတာကတော့ ဒီရွာထဲမှာက အထက်လွှာကလူတွေ များနေတယ်။ တကယ့် အောက်ခြေထဲက လူက မရှိသလောက်။ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းမတွေ ဈေးအပေါဆုံးပဲ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်နဲ့ မိန်းမတွေကို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်။ LT နေချင်နေမယ် မနေချင် မနေဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအကြောင်းတွေပဲ ရှိရှိ၊ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမဟာ တန်းတူပါ။ ဒါဟာ အခြေခံ အကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေး။
ကိုယ် မြင်ချင်တဲ့ အိမ်မက် တွေချည်း ပြောမိသွားလို့ အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါရစေ။
အိမ်ထောင်သည်မိန်းမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ့်လူ သူများလက်ထဲ ပါသွားမှာကို ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးလို့ မရပါဘူး။
ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေ ကိုပြဌန်း ဖို့ ရှေဆုံးကနေ ထောက်ခံပါတယ်။
မှန်တာပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ မယားပြိုင်ထားလို့ ရတယ် ဆိုတာ အရင်က မသိခဲ့ပါ။
(ကိုယ်မသိတာတွေ သိသိလာ တာ ဒီ ရွာ တန်ခိုး ဆိုတာတော့ ထူးပြောမနေတော့ဘူး)
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် တို့တွေ ဘာတတ်နိုင်မလဲ။
ပြည်သူ့အသံကို နားပိတ်ထားတဲ့ လွှတ်တော် အစိုးရ မင်း များ လက်ထဲမှာ ဒါတွေ ကို ချောင်ထိုးထားတာ လက်တွေ့သိနိုင်ပါတယ်။
ဒင်းတို့ ၄ယောက် ဆို ကိုယ်တွေလဲ ၄ယောက်လို့ လူရွှင်တော်တွေ လိုတော့ မပျက်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့ အကြောင်းကို ဘဲ ရှေ့တန်းထားပြောမိလိုက်ခြင်းပါ။
တမင်ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ကြောင်းလေး အရီး ညီမ သိစေချင်တယ်။
တစ်ခြားမှာတွေတော့ မသိပါ။ ဒီမှာတော့ လင်ပြိုင်၊ မယားပြိုင် ထားမရပါ။
လင်ရှိ၊ မယားရှိ ဖောက်ပြန်ရင် အပြစ်ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်လိုချင် အရင်လူ ကို တရားဝင် စိတ်ကျေနပ်အောင် ပေးကမ်းပြီးမှ ကွဲလို့ ရပါတယ်။
အလွယ် နဲ့ ကွဲမရပါ။
ဒါကြောင့်လဲ နေကြတာပေါ့။ မပေါင်းချင် ဆင်းသွားရုံဘဲ။
ဒါတောင် ကလေးရှိရင် ကလေးစရိတ် ထောက်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည် မှာ ဒါမျိုး အင်မတန် မကောင်းတဲ့ ဒီလို ရှေးရိုးဥပဒေတွေ ပြင်ဖို့ အချိန်ကာလနဲ့ လိုက်တဲ့ ဥပဒေအသစ်တွေ ပြင်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
ဒါတွေကို စေတနာရှိရှိ စွမ်းအားရှိရှိ ပြင်ပေးမဲ့ လူ လိုနေတာမို့